Mmezi kọmputa na-agbanye ma ọ nweghị ihe na - egosi na ihuenyo - Ikkaro
Inicio >> Ndozi >> Kọmputa m na-agbanye ma ọ nweghị ihe na-egosi na ihuenyo
Nke a bụ ihe mere m na PC m dị afọ itoolu. Kọmputa na-amalite ma ọ nweghị ihe na-ahụ na ihuenyo. Ana m akọwa otu esi achọpụta njehie iji chọpụta ihe na-adaba, ebe ọ dị ka ọ bụ njehie nkịtị.
Ọdịda a na-esitekarị n'otu n'ime ebe 3 ndị a:
Nke mbụ, chọpụta na ịnweghị USB, cd, smartphone, nche, fitbit, ma ọ bụ ngwaike ndị ọzọ jikọtara kọmputa ahụ.. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ejikọrọ na-abụghị òké, kiiboodu na ndị ọkà okwu, wepu ya ma gbalịa ịmalite ọzọ. Ọtụtụ mgbe anyị na-echefu ihe ejikọrọ na ọ bụrụ na anyị nwere BIOS ahazi ka buut si disk dị na mpụga ọ na-anwa ime ya ma nye njehie ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị mmezi a, lelee aghụghọ a ka unlock kpọghee ekwt smartphone na a gbajiri ihuenyo.
Anyị na-enyocha na ihuenyo na-arụ ọrụ. Ọ dị ka bullshit, mana ọ bụ ihe a ga-atụfu. Ebe ọ bụ na ọdịda anyị tụlere, kọmputa na-arụ ọrụ, ọ na-amalite, yabụ ọ nwere ike bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma mana ihuenyo ahụ emebila.
Nwalee ya dị mfe, jikọọ laptọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ nwere HDMI ma ọ bụ ọ bụrụ na nyocha ahụ nwere televishọn, gbalịa ịhụ ma ọ na-arụ ọrụ. Dị ka ọ dị, anyị ga-enweta ozi ọ bụla, ma na nke anyị amalarịrị na a na-achịkwa njehie ihuenyo.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla RAM modul ị jikọtara mebiri emebi ma ọ bụ jikọta ya nke ọma, n'ihi na ọ pụtawo, n'ihi na enwere unyi ma ọ naghị eme ezigbo kọntaktị, anyị nwekwara ike ịchọta nsogbu a.
Hichaa ájá, ezigbo bụ na abịakọrọ ikuku ma ọ bụrụ na anyị na-atọ na ihe mgbochi static ahịhịa. Mana iji ahịhịa nkịtị ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla.
Gbanwee modulu oghere. Gbalịa ha n’otu n’otu ka ị mara ma ha adaa.
Kaadị eserese ma ọ bụ GPU
Nhọrọ ọzọ bụ eserese. Have ga-ewepụ ya, hichaa njikọ gị na ahịhịa ma nwalee ọzọ ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ.
Tupu ịzụrụ ihe osise ọzọ, jụọ enyi gị otu nke ochie iji jide n’aka na ọ bụ ihe dị njọ n’ezie.
Esi edozi eserese
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ebumnobi nke isiokwu a, m hapụrụ ụfọdụ obere ihe ngosi.
Ọ bụrụ na ọ mebiri emebi, hichaa fan na heatsink nke ọma, wepụ ya ma gbanwee ihe mkpuchi ọkụ. Hụ ma ọ bụrụ na enwere akụrụngwa na ọnọdụ ọjọọ nke enwere ike dochie ya ma ọ bụ onye na-ere ihe ọjọọ.
N'ikpeazụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike ime ka ọ rụọ ọrụ anyị pụrụ ịtụgharị ime Reflow nke m ga-akuzi ime na edemede ozo.
Nchọpụta Njehie Nneboard na Beeps
Na motherboards nwere nchoputa nchoputa nke ha na agwa anyi ihe adighi aru oru. Enwere ike ịhụ ya na ndị LED na bọtịnụ ike, ọ bụ ezie na ihe kachasị mfe bụ mkpọtụ, ụda ọ na-ewepụta mgbe enwere nsogbu.
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma na PC anyị, a na-anụ mkpọtụ ma kọmputa na-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ihe adaba, ọ na-eti mkpu dịka usoro, 2 mkpọtụ, 2 ogologo na otu mkpụmkpụ, mkpọtụ 3, wdg.na nke a anyị maara akụkụ nke kọmputa ahụ na-ada ada.
Ugbu a, ọtụtụ mmadụ na-achọ ịntanetị maka nchoputa ụda na ibe ọ bụla ha hụrụ nkọwa dị iche iche maka mkpọtụ ahụ. Nke a bụ n'ihi na ọ dabere na BIOS ị nwere.
Yabụ usoro ziri ezi bụ:
Chọpụta ihe motherboard ị nwere. Na-ele ya anya, ma ọ bụ n'ihi na ị nwere igbe echekwara ma ọ bụ ụfọdụ akwụkwọ ọnụahịa zụrụ.
Ozugbo inwere ya, budata akwụkwọ ntuziaka nke efere gị na-achọ na Google (ihe atụ nke efere gị Akwụkwọ ntuziaka ụdị: pdf)
Mgbe ahụ chọta ebe koodu njehie dị. Ana m achọ n'ime pdf maka mkpụrụ okwu "beep" yabụ m na-ahụ ya na sekọnd ole na ole.
N'ụzọ dị otu a ị ga - ahụ na nchoputa nchekwa dị na njehie gị
Oge ụfọdụ, dịka ọ dị m, kọmpụta anaghị eme mkpọtụ ọ bụla maka na ọ naghị enwu ihe. Ọtụtụ efere etinyela ya mana ndị ọzọ anaghị, ọ batara n'ime igbe ahụ ma echekwara m ya.
Ọ bụrụ na otu ihe ahụ mere gị, chọọ ya, jụọ enyi gị otu ma ọ bụ zụta nke dị mma mgbe niile ịnwe ma ọ bụ hapụ ya ka ọ kwụnye na PC. imara ebe itinyere ya, lee na efere ebe o na-ekwu uzu.
3 Kaadị eserese ma ọ bụ GPU
3.1 Esi edozi eserese
4 Nchọpụta Njehie Nneboard na Beeps